‘म बलात्कृत भएकी हुँ भन्दा कसैले पत्याएनन्’ – erupse.com
बिहान कलेजमा पढ्ने, दिउँसोमा सहकारीमा जागिर गरौँला अनि काठमाडौँमा बहालमा बसेर भाइलाई स्कुल पढाउने उनले कल्पनासमेत गरेकी थिइन् । भनिन्छ मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । त्यहीँ सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिने मानव दानव बनिदिँदा दीपिकाको जीवन अन्धकार बन्न पुग्यो । त्यसबेला एसईई परीक्षा दिएर बसेकी १६ वर्षीया दीपिकाको घर खोला नजिकै छ । अनि घर नजिकै जङ्गल पनि छ । नियमित जसो हिँड्ने जङ्गल पार गरेर दीपिका बजार गर्न जाँदा ३ वर्षअघि सामूहिक बलात्कारमा परिन् ।
उनको घरदेखि बजार पुग्न मात्रै करिब २ घण्टा लाग्छ । त्यस दिन बजार जानेक्रममा पछाडिबाट आएर दुष्ट कामपिपासुहरुको एउटा झुण्डले झयाप्प आँखा र मुख छोपिदियो । त्यसपछि उनलाई हात, खुट्टामा समातेर झाडीतिर लगे । अनि सुरु भयो अमानवीय हर्कत । ती दुष्टहरुले उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरे । उनी रोइन्, कराइन, चिच्याइन् तर कसैले उनको रोदन चिच्याहट सुनेनन् । उनले सक्दो प्रतिरोध गरिन् तर आफूभन्दा बलिष्ठ कामान्ध ती दुष्टहरुका सामु उनको केही सीप लागेन । उनी बेहोस भइन् । बिहान खाना खाएर ९.१५ बजे घरबाट बजार जान निस्किएकी उनको साँझपख मात्रै होस् खुल्या । होस् खुल्दा उनले आफूलाई बनको झाडीमा बेहाल अवस्था पाइन् । बजार गर्न भनी उनल नगद तीन हजार पनि बोकेकी थिइन्, बलात्कारीहरुले उनीसँग भएको त्यो नगद पनि लुटी लगेछन् ।
हाम्रो परम्परागत समाजमा एउटी केटीका लागि सबैभन्दा पवित्र कुरा उसको अस्मिता मानिन्छ । आफ्नो अस्मिता नै लुटिएपछि दीपिका चरम निराशामा डुबिन् । त्यो क्षण उनका मनमा घरमा जाऊँ कि भीरमा गएर हामफालुँ भन्ने दाधारे भावनाको आँधी चल्यो । उनको एक मनमा यो घटनाबारे घरपरिवार र समाजले थाहा पायो भने राम्रो नजरले हेर्दैन, बाँचेर पनि पलपल मर्नुभन्दा त बरु आत्महत्या गर्नु नै बेस हुन्छ भन्ने भावनाले उनलाई छोप्यो । तर उनमा आत्महत्या गरिहाल्ने आँट भने आइहालेन । खासमा, आत्महत्याको विचारले किच्दै गर्दा उनले आफ्नी आमालाई सम्झिन् । घरमा बाबाले मादकपदार्थ सेवन गरेर दैनिक जसो रडाको मच्चाउनुका साथै हातपात गर्दा छुटाउने अनि आमासँगै भाइबहिनीलाई बोकेर घरबाट एकछिनका लागि भाग्न सहयोग गर्ने अल्लि ठूली छोरी उनी मात्रै थिइन् । ‘अँध्यारो भयो, बाबाले कतै सधैँ झैँ आमा भाइबहिनीलाई पिटे, हातपात गरे पो होलान्, तिनीहरुलाई जोगाउने त कोही पनि छैनन्’ भन्ने कुराले उनलाई सतायो र आफ्नी आमा अनि भाइबहिनीको मायाले उनलाई आत्महत्या गर्न दिएन । उनी घर फर्किए ।’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा जाँदा बाबा आमा थिएनन् । विस्तारै गएर विस्तरामा पल्टिएँ । तर आफूमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाबारे आमालाई भन्ने आँट गर्न सकिनन् ।’
यसबीचमा उनले उनले आफूमाथि भएको नारकीय व्यवहार धेरै पटक आमालाई भन्न खोजिन् तर सकिनन् । खासगरी, घरको परिस्थिति देखेर आमालाई धेरै पीडा नदिने अठोट गरिन् । यसबीचमा सामूहिक बलात्कारका कारण उनको पेटमा गर्भ बसेको छ महिना बितिसकेको थियो तर उनलाई ६ महिनासम्म आफू गर्भवती भएको हेक्का नै भएन । तर आफू कुन अवस्थामा छु थाहा पाउन आफैलाई गाह्रो थियो । दीपिका बिरामी हुँदा कमजोर अवस्थामा पुगेका कारण महिनावारी नभएको होला भन्ने आमा लगेको थियो । तर त्यस्तो थिएन ।
आमा र गाउँलेहरूले उनलाई कसको पाप बोकेकी होस् भनेर सोध्न थाले । उनले मलाई थाहा छैन भनिन् । म बलात्कृत भएकी हुँ भन्दा कसैले पत्याएनन् । त्यसपछि उनी आफू गर्भवती भएको थाहा पाएपछि उनी घरबाट भागिन् । घरमा बाबा आमाको झगडा झनै बढ्न थाल्यो, थाहा पाएकाले आफन्त गाउँकाले गर्ने व्यवहारमा परिर्वतन आयो । अनेक खालका व्यवाहारले आजित दीपिका घरबाट भागेर त्यही जङ्गलमा मर्नकै लागि भाग्दा मामाहरुले फेरि घरमै फर्काए ।
त्यसपछि उनलाई धेरै पटक गर्भ भएको बच्चाको बाबु को हो भनेर सोधियो । तर उनलाई काहाली लाग्दो घटना दोर्‍याएर भन्न बाध्य भइन् । मामाहरुको सहयोगमा उनलाई काठमाडौँ ल्याएर जाँच गर्दा आठ महिनाको गर्भ भएको निक्र्योल भयो । त्यसपछि एक गैरसरकारी संस्थामा आश्रित भइन् ।
मावलीको सहयोगमा उनी ललितपुरस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा आश्रित भइन् । त्यहाँ आश्रित भएर बसे पनि उनलाई बच्चा कसरी लालपालन गर्ने ? समाजले बच्चाको बाबु को हो भन्दा के भन्ने ? बच्चाले मेरो बाबा खोइ भन्दा के भन्ने ? समाजमा कसरी अनुहार देखाएर बाँच्ने जस्ता प्रश्नको उनलाई सताउन थाल्यो । त्यहाँ बस्दा मनोपरामर्श गर्दा घरिघरि मन शान्त हुन्थ्यो । जब प्रसूति गृहमा छोरीलाई जन्म दिएपछि उनलाई एक पटक छोरीको अनुहार झुलुक देखाइयो ।
दीपिकाले कलिलो उमेरमा बाध्य भएर छोरीलाई जन्म दिइन् । आमा बनेर पनि मेरी छोरी हो भनेर हुर्काउन अनि हेरचाह गर्न नसकेको पीडाले पलपलमा पोल्ने गर्छ उनलाई । नानीलाई सम्झिएर आफ्नो अवस्था सम्झेर रातभरि उनलाई निद्रा लाग्थेन । नानीलाई नहर्ने नभेट्ने अठोट गरेकी थिइन् । तर, आधा रातमा कसैले थाहा नपाउने गरी नानीलाई हेर्न पटक पटक गइन् । नानीलाई हेरेर शौचालयमा गएर रुँदै रात कटाएको उनले सुनाइन् ।
बुधबार, पुस १६, २०७६ मा प्रकाशित